तपाइँलाई सेक्सुअल असन्तुष्टि हुन्छ ? मानसिक रोग पनि हुनसक्छ « Nagarik Khabar
तपाइँलाई सेक्सुअल असन्तुष्टि हुन्छ ? मानसिक रोग पनि हुनसक्छ
प्रकाशित मिति : 24 August, 2019 12:25 pm
काठमाडौं । धेरै मानिसलाई थाहा नहुन सक्छ कि सेक्स सम्बन्धि समस्या पनि मानसिक अन्तर्गत पर्दछ भनेर । आज हामी यससम्बन्धी जान्ने प्रयास गर्दैछौँ ।
यो समस्या हामी मध्ये धेरै व्यक्तिलाई भएपनि यसलाई हामीले लुकाउने, अरु सामु नभन्ने गर्दा श्रीमान र श्रीमतीबीचमा नै समस्या पैदा हुने गर्छ ।
आउनुहोस् यी समस्याहरु कस्ता कस्ता हुन्छन ? भन्ने विषयमा जानकारी लिने प्रयास गरौँ ।
American research अनुसार सेक्स सम्बन्धि केहि तथ्यहरु
• ८५% महिला तथा ७५% पुरुष एक अर्कासँग मात्र सम्बन्ध राख्ने हुन्छन् ।
• ४१% विवाह भएकामध्येले हप्तामा २ पटकसम्म सेक्स गर्छन् ।
• केटाहरुको लागि सेक्स पार्टनर जीवनभर ६ जना हो भने केटीको लागि त्यो २ हो ।
• ८३% पुरुषको लागि र ७८% महिलाको लागि सेक्सुअल सम्बन्ध भनेको भेजैनल Intercourse हो ।
• विवाह भएका पार्टनर मध्ये ८२% को उही Education, ७८% को ५ years सम्मको difference, र ७२% को उही धर्म हुने गरेको छ ।
• केटा र केटी जसको सानो उमेरमा सेक्सुअल abuse भएको छ उनीहरुको १० जना भन्दा बढी सेक्स पार्टनर, group मा सेक्स गर्न चाहने, होमोसेक्सुअल या बाईसेक्सुअल हुने हुन्छ ।
• ४ जना मध्ये एक केटाले र १० जना मध्ये १ केटीले हस्तमैथुन मा सहभागी गर्छन् ।
• आधा भन्दा धेरै केटाहरुले हरेक दिन सेक्स को बारेमा सोच्छन भने १९% महिलाहरुले मात्र त्यस्तो गर्छन् ।
Hypoactive सेक्सुअल desire disorder: यो महिला या पुरुष दुबैजनालाई हुने गर्छ । यसमा उनीहरुलाई सेक्स गर्नु मन नलाग्ने, आफ्नो पार्टनर Unattractive लाग्ने, या रहर नहुने हुन्छ ।
प्रश्न गर्दा उनीहरुले कुनै सेक्स प्रतिको विचार नहुने, सेक्सुअल act गर्न interest नदिने हुन्छ । २०% जनसंख्यालाई यो समस्या हुने गरेको पाईएको छ। यो महिलामा बढी देखिने खालको समस्या हो ।
यो desire सम्बन्धि समस्या हुने व्यक्तिहरुको ego strong हुने र सेक्स सम्बन्धिको डरलाई defensive तरिकाले दबाउने हुन्छ । यो समस्या धेरै तनाब, निरासपन र Anxiety ले गर्दा पनि हुन्छ ।
लामो समय सम्म सेक्स नगर्दा पनि यो आफै दबेर जान सक्दछ। यो आफ्नो पार्टनर प्रतिको रिस देखाउने माध्यम या सम्बन्ध बिग्रदै गएको सूचक पनि हुन सक्दछ।
सेक्सुअल Aversion disorder: लगातार जस्तो सेक्स या तेस्तै किसिमका activity हरु आफ्नो पार्टनर संग गर्न नचाहनु नै यो समस्याको मुख्य symptoms हो। यो समस्याको कारणमा सेक्स गर्दा traumatic हुनु, बच्चा बेलामा सेक्सुअल करणी हुनुलगायतका कारणहरु पर्छन् ।
सेक्सुअल Arousal disorder:-
Female सेक्सुअल Arousal disorder: त्यस्ता महिलाहरु जसको Excitement phase मा समस्या हुन्छ। १४-१९% महिलाहरुमा लामो समयदेखि lubrication को समस्या देखिने गरेको छ।
Master & Jhonson ले भनेअनुसार सामान्य महिलाहरुमा महिनावारी हुनुभन्दा अगाडि सेक्स को चाहना हुन्छ भने समस्या भएका महिलाहरु महिनावारी भैसकेपछि सेक्स गर्न बढी रुचाउँछन् ।
अर्को group को महिलाहरुलाई ovulation को बेलामा सेक्स गर्न बढी मन लाग्छ । Testosterone, estrogen, prolactin, thyroxine को गडबडीको कारण ले गर्दा पनि महिलाहरुमा यो समस्या हुने गरेको छ।
Male इरेकटाइल disorder: २-४% केटा मानिसहरुलाई ३५ बर्षको हाराहारीमा सेक्स मा समस्या आउँछ भने ७७% केटा मानिसहरुलाई ८० बर्षको समय पछि समस्या आउँछ ।
त्यस्ता अनुभव जुन अनुभव ले Intimacy, विश्वास, अथवा माया नगरेको अनुभव गराउँछ । त्यस्तो समयमा यस्तो महसुस हुन सक्छ । पार्टनरबीचको सम्बन्ध बिग्रनु, आफ्नो इच्छा पूर्ति नहुनु र भन्न पनि नसक्नु जस्ता समस्याहरु उत्पन्न हुन सक्छ । यो समस्या बढ्दै जाँदा केटा मानिसलाई अर्को सम्बन्ध राख्नुपर्दा सकिन्न कि भन्ने चिजले छटपटी उत्पन्न गर्न सक्छ ।
चरमोत्कोर्स सेक्सुअल disorder:
Female चरमोत्कोर्स disorder: सम्बन्ध राखिसकेपछि excitement हुन्छ । यदि महिलाले चरमोत्कोर्स को महसुस गर्न सकेन र त्यो बारम्बार भैराखेमा त्यसलाई चरमोत्कोर्स disorder भनिन्छ।
धेरै महिलाहरुले हातको प्रयोगबाट र सम्भोगबाट चरमोत्कोर्स पाउने गर्दछन् । अविवाहित महिलाहरुमा यो समस्या विवाहित महिलाहरुमा भन्दा बढी देखिन्छ ।
गर्भवती हुने भन्ने डरले, पार्टनर ले वास्ता नगर्नाले, केटा मनिससंग रिसाउनाले, सम्भोग प्रतिको गलत धारणाले, सामाजिक नियम र संस्कार ले पनि यसमा प्रभाव पर्छ ।
Male चरमोत्कोर्स disorder:-यो समस्या OCD disorder भएकामा बढी देखिने गर्दछ। Parkinsonism, neurological problems. कति केटा मानिसहरुलाई सम्भोग फोहोर कुरा हो, यो गलत कुरा हो, केटीहरुसँग नजिकिन हुँदैन भन्ने लाग्दछ र त्यसैले गर्दा चरमोत्कोर्स मा समस्या आउने गर्छ ।
श्रीमान-श्रीमतीमा यस्तो समस्या हुनुको कारण आपसी सम्बन्धमा समस्या हुनु हो। यो व्यक्तिको fantasy र reality नमिल्नुको कारणले गर्दा पनि हुन्छ। श्रीमतीलाई रिस देखाउन खोज्नु, श्रीमती राम्री नलाग्नु, श्रीमती pregnant गराउन नखोज्नु आदि हुन् ।
Premature Ejaculation: यो समस्यामा पुरुषहरुलाई सम्भोग गर्दा छिट्टो स्खलन हुने समस्या आउँछ, जसले गर्दा सम्भोग गर्दा लामो समयसम्म गर्न नसक्ने हुन्छ । ४०% सम्भोग सम्बन्धी समस्यामा पुरुस हरुलाई ३०% त Premature ejaculation सम्बन्धि समस्या नै देखिने गर्छ ।
Compulsive सेक्सुअल behaviour: यसमा व्यक्तिलाई बारम्बार सम्भोग गर्ने चाहना हुन्छ र सम्भोग गर्न नपाएमा स्वभावमा नै परिवर्तन आउने हुन्छ ।
Postcoital dysphoria: राम्रो तरिकाले सम्भोग गरिसकेपछि पनि कुनै एक पार्टनरलाई रिस उठ्ने, छटपटी हुने, depressed हुने आदि हुन्छ । त्यतिखेर उक्त व्यक्तिलाई आफ्नो पार्टनर लाई छोडेर जान मन लाग्ने, बोल्नु मन नलाग्ने हुन्छ ।
Body image problems:- पुरुष र महिलाहरुलाई आफ्नो शरीरको बारेमा, बनोटको बारेमा तनाब हुने गर्दछ, जसले गर्दा यस्ता व्यक्तिहरु सम्भोग गर्दा आध्यारोमा गर्न रुचाउँछन् । त्यस्तै आफ्नो शरीर राम्रो बनाउनको लागि Operation गर्न रुचाउँछन् ।
Postcoital headache:– सम्भोग गर्ने बित्तिकै टाउको दुख्ने समस्या आउँछ र त्यो धेरै घन्टासम्म जान सक्छ ।